Show All Most Popular Rice Spaghetti Salad Dessert Sandwich Snack Waffles New Special Drink Menu UJI Matcha Yogurt Series Royal Tea Series Super Fresh Fruit Series 100% Lemon Series Milk Tea Series Cocoa Dirty Tea Series Cake and Latte BoBo Tea Colorful Lemon Soda Muffin Hot Drink Series Coffee
Super Fresh Fruit Series
100% Lemon Series
Dirty Tea Series
Cake and Latte
Colorful Lemon Soda
Hot Drink Series
No-(50), 34th Street, Bet:73rd & 74th Street, Mandalay , MM Chanayethazan
Sunday09:00 - 19:45
Tuesday09:00 - 19:45
Thursday09:00 - 19:45
Saturday09:00 - 19:45
M2. Bubble Milk Tea (ဘာဘယ်နို့လက်ဖက်ရည်)
M3. Orea Milk Tea (အော်ရီယိုနို့လက်ဖက်ရည်)
D3. Strawberry Dirty Tea (စတော်ဘယ်ရီကျန်းကျန်း)
Sn7. Octopus Balls(ဂျပန်မုန့်လုံးကြော်)
M1. Milk Tea (နို့လက်ဖက်ရည်)
R1. Thai Seafood Rice with Curry (ထိုင်းပင်လယ်စာထမင်းကြော်)
D2. Mango Dirty Tea (သရက်ကျန်းကျန်း)
Sf7. Full Cup of Strawberry (စတော်ဘယ်ရီဖျော်ရည်)
Sn4. Spicy French Fries (အာလူးအစပ်)
Sg1. Tomato Sauce Spaghetti (ကြက်သားခရမ်းချဉ်သီးဆော့စပါကတီ)
R2. Crispy Chicken Rice (ကြက်ကြော်ထမင်း(ရင်အုပ်)
R3. Egg Wrapped Rice (ကြက်ဥလိပ်ထမင်း)
R4. Fried Rice with Vegetable and Egg (သီးစုံကြက်ဥထမင်းကြော်)
R5. Fried Rice with Shrimp (ပုဇွန်ဆီထမင်း)
R6. Thai Basil Rice (ကြက်ပင်စိမ်းထမင်း)
R7. Braised Rice (ထမင်းပေါင်း)
R8. Beef Jerky Fried Rice (အမဲသားခြောက်ထမင်းကြော်)
Sg2. Tomato Sauce Macaroni (ကြက်သားခရမ်းချဉ်သီးဆော့မာကာရိုနှီ)
Sg3. Beef Noodle (အမဲသားခေါက်ဆွဲ)
Sg4. Rice Noodles Shredded (မြီးရှည်သုပ်)
Sg5. Noodle Salad with Meat (ဂျုံခေါက်ဆွဲသုပ်)
Sg6. Tomato Sauce Seafood Spaghetti
Sg7. Seafood Spaghetti
Sa1. Fruit Salad (သီးစုံဆလပ်)
Sa2. Cobbo Salad (ကိုပိုဆလပ်)
Sa3. Vegetable Salad (သီးရွက်စုံဆလပ်)
Sa4. Spaghetti Fruit Salad (စပါဂတီသီးစုံဆလပ်)
Ds1. Mango Simiao (သရက်နို့သာကူ)
Ds2. Caramel Grey (ကြက်ဥပူတင်း)
Ds3. Chocolate Bree (ချောကလက်ပူတင်း)
Ds4. Fruit Milk Jelly (အသီးနို့ဂျယ်လီ)
Ds5. Sugar Snow Swallow (ဆေးကုလားအချိုရည်)
Sw1. Cheese Sandwich (ချိစ်ဆန်းဝစ်ခ်ျ)
Sw2. Tuna Sandwich (တူနာငါးဆန်းဝစ်ခ်ျ)
Sa3. Avocado Sandwich (ထောပတ်သီးဆန်းဝစ်ခ်ျ)
Sa4. Grilled Cheese Cream Toast (ချိစ်ကြက်သားပြားပေါင်မုန့်ကင်)
Sa5. Butter Toast (ပေါင်းမုန့်ထောပတ်ကင်)
Sn1. Sour Spick Chicken Leg (ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ်)
Sn2. Garlic Chicken Leg (ကြက်ခြေထောက်အစပ်)
Sn3. Fried Squid (ကင်းမွန်ကြော်)
Sn5. Fried Potato (အာလူးကြော်)
Sn6. Potato Shrimp Ball (အာလူးပုဇွန်လုံး)
Sn8. Egg Sausage (ကြက်အူချောင်းလိပ်)
Sn9. Fried Chicken Wings (ကြက်တောင်ပံကြော်)
Sn10. Fried Chicken Drumsticks (ကြက်ပေါင်ကြော်)
Sn11. Fried Finger Fish (ငါးလက်ချောင်းကြော်)
Sn12. Fried Beef Jerky (အမဲသားကြော်)
Sn13. Sticky Rice (ကောက်ညင်းပေါင်း)
W1. Waffles (ကြက်ဥဝေဖာမုန့်လုံး)
W2. Red Bean Waffles (ပဲနီဝေဖာမုန့်လုံး)
W3. Matcha Waffles (လက်ဖက်ညွန့်ဝေဖာမုန့်လုံး)
W4. Cocoa Waffles (ကိုးကိုးဝေဖာမုန့်လုံး)
Cheese Black Grape Smoothies
Black Grape +jelly+Grapefruit
U1. UJI Matcha (ယူဂျီလက်ဖက်ညွန့်)
U2. Milk Salt UJI Matcha (နို့လက်ဖက်ညွန့်)
U3. Red Bean Matcha Tea (နို့ပဲနီလက်ဖက်ညွန့်)
U4. Cheese UJI Matcha (ချိစ်လက်ဖက်ညွန့်)
Y1. Mango Yogurt (သရက်နို့ချဉ်)
Y2. Passion Fruit Yogurt (ပင်မှည့်နို့ချဉ်)
Y3. Fresh Lemon Yogurt (သံပုရာနို့ချဉ်)
Y4. Strawberry Yogurt (စတော်ဘယ်ရီနို့ချဉ်)
Y5. Dragon Yogurt (နဂါးမောက်နို့ချဉ်)
Cc/ C.1 King Tea (လက်ဖက်ဘုရင်)
Cc/ C.2 Jasmine Tea (စံပယ်လက်ဖက်)
Cc/ C.3 Carmine Tea (လက်ဖက်နီ)
Cc/ C.4 Mountain Green Tea (လက်ဖက်စိမ်း)
Cc/ C.5 Peach Oolong (မက်မွန်လက်ဖက်)
Cc/ C.6 Osmanthus Oolong (ရေမွှေးပန်း)
Cc/ C.7 Rose Oolong (နှင်းဆီ)
Sf1. Papaya Juice (သင်္ဘောသီးဖျော်ရည်)
Sf2. Watermelon Juice (ဖရဲသီးဖျော်ရည်)
Sf3. Pineapple Juice (နာနတ်သီးဖျော်ရည်)
Sf4. Orange Juice (လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်)
Sf5. Full Cup of Grapefruit (ဂရိတ်ဖရုဖျော်ရည်)
Sf6. Full Cup of Sunkist (ဆန်းကစ်ဖျော်ရည်)
Sf8. Full Cup of Avocado (ထောပတ်သီးဖျော်ရည်)
Sf9. Full Cup of Mango (သရက်သီးဖျော်ရည်)
Sf10. Full Cup of Dragon (နဂါးမောက်သီးဖျော်ရည်)
Sf11. Full Cup of Kiwi (ကီဝီသီးဖျော်ရည်)
Sf12. Full Cup of Green Lifit (စပျစ်စိမ်းဖျော်ရည်)
Sf13. Full Cup of Black Lifit (စပျစ်မည်းဖျော်ရည်)
Sf14. Full Cup of Red Pomegranate (သလဲသီးဖျော်ရည်)
Sf15. Full Cup of Honey Peach (မက်မွန်သီးဖျော်ရည်)
Sf16. Super Fruit Tea (သီးစုံလက်ဖက်ဖျော်ရည်)
L1. Violence Lemon Tea (လက်ဖက်သံပုရာ)
L2. Violence Lemon Green Tea (သံပုရာလက်ဖက်စိမ်း)
L3. Violence Lemon Seasons Spring (နွေဦးသံပုရာ)
L4. Violence Pepper Mint (သံပုရာပူစီနံ)
L5. Violence Whole Lemon (သံပုရာချစ်သူ)
L6. Violence Passion Lemon Green Tea (ပင်မှည့်သံပုရာလက်ဖက်စိမ်း)
L7. Violence Passion Fruit Lemonade (ပင်မှည့်သံပုရာလက်ဖက်နီ)
M4. Crystal Milk Tea (ဂျယ်​လီနို့လက်ဖက်ရည်)
M5. Red Bean Milk Tea (ပဲနီနို့လက်ဖက်ရည်)
M6. Roast Milk Tea (ရို့စ်​နို့လက်ဖက်ရည်)
M7. Royal Three (ရတနာသုံးမျိုးလက်ဖက်ရည်)
M8. Sweet Scented Osmanthus (ချယ်ရီနို့လက်ဖက်ရည်)
Co1. Cocooa (ကိုးကိုး)
Co2. Milk Salt Cocoa (နို့ကိုးကိုး)
Co3. Red Bean Cocoa (နို့ပဲနီကိုးကိုး)
Co4. Cheese Cocoa (ချိစ်ကိုးကိုး)
D1. Tiger Spot Dirty Tea (ပုလဲသကြားနက်နို့ဖျော်ရည်)
D4. Milk Tea Dirty Tea (နို့လက်ဖက်ရည်ကျန်းကျန်း)
D5. UJI Matcha Dirty Tea (နို့လက်ဖက်ညွန့်ကျန်းကျန်း)
D6. Sweet Potatoes Dirty Tea (ကန်စွန်းဥကျန်းကျန်း)
D7. Taro Dirty Tea (ပိန်းဥကျန်းကျန်း)
Cl1. Cake and Strawberry Latte (စတော်ဘယ်ရီကိတ်ဖျော်ရည်)
Cl2. Cake and Coco Latte (ကိုးကိုး ကိတ်လက်တေး)
Cl3. Cake and Matcha Latte (လက်ဖက်ညွန့်ကိတ်လက်တေး)
Cl4.Cake and Sweet Potatoes Latte (ကန်စွန်းဥ ကိတ်လက်တေး)
Cl5. Cake and Taro Latte (ပိန်းဥကိတ်လက်တေး)
Cl6. Cake and Milk Tea Latte (နို့လက်ဖက်ကိတ်လက်တေး)
B1. Sakura Bobo Tea (ဆာကူရာဘိုဘိုလက်ဖက်ရည်)
B2. UJI Matcha Bobo Tea (လက်ဖက်ညွန့်ဘိုဘိုလက်ဖက်ရည်)
B3. Sweet Potatoes Bobo Tea (ကန်စွန်းဥဘိုဘိုလက်ဖက်ရည်)
B4. Orea Cocoa Bobo Tea (အော်ရီအိုကိုးကိုးဘိုဘိုလက်ဖက်ရည်)
B5. Taro Bobo Tea (ပိန်းဥလက်ဖက်ရည်)
B6. Redbean Bobo Tea (ပဲနီဘိုဘိုလက်ဖက်ရည်)
B7. Purple Rice BoBo Tea (ငချိတ်ဘိုဘိုလက်ဖက်ရည်)
B8. Oats Bobo Tea (မုယောစပါးဘိုဘိုလက်ဖက်ရည်)
B9. Super Boba Milk Tea (စူပါဘိုပါလက်ဖက်ရည်)
Cc/C1. Lemon Soda Natural (သံပုရာဆိုဒါ)
Cc/C2. Red Soda Lemon (သလဲသံပုရာဆိုဒါ)
Cc/C3. Purple Lemon Soda (အောင်မဲညိုသံပုရာဆိုဒါ)
Cc/C4. Pink Lemon Soda (မက်မွန်သီးသံပုရာဆိုဒါ)
Cc/C5. Blue Lemon Soda (အပြာရောင်ဆိုဒါ)
Cc/C6. Yellow Lemon Soda (လိမ္မော်သံပုရာဆိုဒါ)
Cc/C7. Green Lemon Soda (ပူစီနံသံပုရာဆိုဒါ)
Cc/C1. Milk Muffin (နို့မာဖင်း)
Cc/C2. Honey Muffin (ပျားရည်မာဖင်း)
Cc/C3. Chocolate Muffin (ချောကလက်မာဖင်း)
Cc/C4. Matcha Muffin (လက်ဖက်ညွန့်မာဖင်း)
Cc/C5. Ice Cream Fruit Muffin (သီးစုံရေခဲမုန့်မာဖင်း)
H1. Job's Tears (မုယောစပါးမွှေး)
H2. The Breeze Snow (ပြောင်းကွေကာ)
H3. Coconut yangu (အုန်းကွေကာ)
H4. Yanblack Food (နှမ်းမဲကွေကာ)
H5. Red Ginger Xiang Gu (ပြောင်းသကာဂျင်း)
H6. Ginger Lemon Juice ( ဂျင်းသံပုရာ)
H7. Lemon Tea (လက်ဖက်သံပုရာ)
Co1. Espresso Hot Coffee
Co2. Iced Coffee